Halista feyriska dilaaga ah ee Shiinaha ka dilaacay oo sii kordhaysa | Xaysimo
Home War Halista feyriska dilaaga ah ee Shiinaha ka dilaacay oo sii kordhaysa
Halista feyriska dilaaga ah ee Shiinaha ka dilaacay oo sii kordhaysa
Faafidda feyriska ku dhaca neef mareen ayaa si xawli ah ugu sii fidaya dalka Shiinaha, waxaa sidaasi ka digay madaxwaynaha Shiinaha Xi Jinping.
Mdaxwaynaha ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray sarakiisha dowladda xilli dalkaasi looga dabaaldagayo sanadka cusub ee Shiinaha ee Lunar.
Feeriska ayaa waxaa ilaa iyo imika u dhintay ugu yaran 56, halka uu guud ahaan Shiinaha uu soo ritay dad gaaraya 2,000.
Seynisyahano ayaa sheegaya in dowladda Shiinaha laga doonaya in ay dhinto heerka isu gudbinta feeriskan faraha ba’an ku haya dalkaasi ee neef mareenka ku dhaca 60% waa haddii ay tahay in cudurka la joojiyo.
Mas’uuliyiinta waddanka Shiinaha ayaa joojiyay adeegyadii diyaaradaha iyo tareennada ee magaalada Wuhan – oo ah magaalo ay ku nool yihiin 11 malyan oo ruux – waxaana sidoo kale la hakiyay gaadiidkii dadweynaha ee ka dhex shaqeynayay gudaha magaalada.